Daryeelka Mashiinnada Raadinta Miyaad Daryeelaysaa Haddii Aad Isticmaasho Drupal? | Martech Zone
Nidaamyada Maareynta Mawduuca iyo SEO
Intee in le'eg ayey sameeyaan Nidaamyada Maareynta Mawduuca (CMS), sida WordPress, Drupal, Joomla!, qayb ka ciyaar ayna search engine (SEO)? Xaqiiqdii naqshadeynta goobta xun (ma nadiifiso urls, waxyaabaha xun, isticmaalka liita ee magacyada domain, iwm) ee CMS sida Drupal waxay saameyn ku yeelan doontaa SEO (qalab aad u fiican oo loo isticmaalo fikrad xun). Laakiin nidaamyada maaraynta maaddooyinka laftoodu miyay amaahdaan SEO ka fiican kuwa kale, haddii dhammaan dhaqannada kale ee wanaagsan la sameeyo? Iyo, sidee nidaamyada isku qasmi kara (ex, WordPress ama Drupal blog oo taageeraya a Soo iibso site) saameyn ku yeesho SEO (mar kale u maleynaya in dhammaan hababka kale ee wanaagsan ee SEO la raaco)?
Marka laga eego aragtida mashiinka raadinta, ma jiro farqi u dhexeeya Drupal, WordPress, ama Shopify. Kahor intaanan igu dhicin “Sug daqiiqad”, aan caddeeyo. Mashiinnada raadinta waxay eegaan HTML-ka iyaga loogu adeego markii ay gurguuranayaan xiriiriyeyaasha. Ma fiirinayaan xogta ka dambeysa websaydhka mana fiirinayaan bogga maamulka loo isticmaalo in lagu hagaajiyo goobta. Maxay mashiinnada raadinta raadinayaan waa HTML-ka la soo saaray, ama loo bixiyay, nidaamka maareynta waxyaabaha ku jira.
Tusaale ahaan: Markaad isticmaaleyso Drupal, waa inaad ikhtiyaar u leedahay inaad daarto nadiif URLs. Uma baahnid inaad isticmaasho URL-yada nadiifka ah, laakiin markii aad isticmaasho, waxaad helaysaa URL uu bini aadamku fahmi karo (tusaale: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / la tashiga / suuqgeynta). Iyo, haa, URL-yada nadiifka ah ayaa kaa caawin kara SEO.
Tusaale kale: Drupal, iyada oo loo marayo Pathauto moduleka, wuxuu abuuri doonaa URL-yo macno leh oo ku saleysan cinwaanka bogga. Tusaale ahaan, bog cinwaankiisu yahay "10 Waxqabadyada Xagaaga ee Carruurtaada" ayaa si otomaatig ah u heli doona URL ah http://example.com/10-summer-activities-for-your-kids. Uma baahnid inaad isticmaasho Pathauto laakiin waa inaad sida ay kaa caawineysaa ka dhigaa bogga URL mid sahlan oo loogu talagalay dadka inay akhriyaan oo xasuustaan.
Tusaalaha ugu dambeeya: Khariidadaha goobta ka caawi mashiinnada raadinta inay fahmaan waxa ku jira bartaada. In kasta oo aad gacanta ku abuuri karto (ug) khariidad goob oo aad u gudbin karto Google ama Bing, waa hawl ku habboon kumbuyuutarrada. Drupal Sitemap XML moduleku waa inuu lahaadaa maaddaama uu si otomaatig ah u abuuro una ilaaliyo faylasha bogga khariidada wuxuuna siiyaa awood uu ugu gudbiyo matoorada raadinta.
Google ama Bing aad uma xiiseeyaan inaad isticmaasho ama ma isticmaashid Drupal, waxa kaliya ee ay dhab ahaan daneeyaan waa soosaarka Drupal. Laakiin waxaad u baahan tahay daryeel ku saabsan isticmaalka Drupal, maadaama ay tahay aalad fududeynaysa habka loo abuurayo SEO saaxiibtinimo HTML iyo URLs.
Si kooban u dhaaf aside Drupal waa qalab uun. Waxay bixin doontaa astaamaha iyo shaqooyinka looga baahan yahay dejinta iyo socodsiinta degel internet ah. Kuu qori maayo qoraalo waaweyn. Taasi wali adiga ayey kugu xiran tahay. Tirada ugu horeysa ee aad sameyn kartid si aad saameyn ugu yeelatid qiimeyn kasta oo SEO ah ayaa leh macluumaad si fiican loo qoray, macno u leh mowduuca, oo si isdaba joog ah loo abuuray waqti ka dib.
Tags: sentimitirnidaamka maamulka contentdrupalhagaajinta mashiinka raadinta drupalisku mid ahSEO
John waa Madaxa Abuurista Bulshada at Warbaahinta Truffle. Shabakadaha Isgaadhsiinta ee 'Truffle Media Networks' waxay bixiyaan Ag Media Waxaad Isticmaali Kartaa, iyada oo loo marayo soo saar tayo sare leh, soosaaris goos goos ah iyo qaybinta taxanaha warbaahinta ee ganacsiga diiradda saaraya.
ChaCha + iPhone: Digniinta, Juqraafiga, Jawaabaha, Wadaagista
Apr 26, 2011 at 9: 33 PM
Xaqiiqdii waad saxantahay, matoorada raadinta John NOT DARYEEL maahan waxa uu yahay CMS-gaagu. Si kastaba ha noqotee, markaan la shaqeeyay nidaamyo maareyn badan oo maareyn ah, waxaan kuu sheegi karaa inay jiraan nidaamyo badan oo duug ah oo suuqa ka jira oo aan lahayn astaamo lagama maarmaan u ah in si buuxda loo habeeyo. Awoodda lagu cusbooneysiin karo robots.txt, sitemaps.xml, xoqitaanka matoorada raadinta, qaabeynta bogagga (oo aan lahayn jadwalka miiska), ku habboonaynta xawaaraha bogga, cusbooneysiinta xogta meta meta waxaad ogaan doontaa in nidaamyo badan oo maareynta maareynta ahi ay ku khasban yihiin isticmaalayaashooda. Natiijo ahaan, macmiilku wuxuu si adag ugu shaqeeyaa waxyaabaha aan si buuxda looga qaadin.
Apr 28, 2011 at 12: 55 PM
Waad saxantahay, John. Waxaan la kulmay su'aalo badan oo ku saabsan Quora iyo kuwa kale kuwaas oo CMS ugu fiican SEO. Jawaabtu waxay ku saabsan tahay uun mid ka mid ah nidaamyada maareynta maareynta waxyaabaha cusub ee leh awood ay ku sameystaan ​​URL-yo nadiif ah ayna adeegsadaan aalado badan oo matoorada raadinta ay jecel yihiin inay adeegsadaan.
@Doug - sidoo kale waad saxantahay Nidaamyada maareynta maaddooyinka duugga ah ayaa inta badan aan lahayn awood ay si habboon ugu dhex galaan SEO.
Xaaladaha qaarkood, xitaa CMS casri ah waxay yeelan kartaa diidmo, ama ugu yaraan, ka yar saamaynta ugu habboon ee SEO.
Joomla, tusaale ahaan, waxay leedahay qaabeyn qaabeyn ah oo loogu talagalay abuurista sharraxaad jireed oo ballaadhan oo lagu dabaqi doono bog kasta oo uusan qoraagu abuurin sharraxaad meta ah. Tani waxay u horseedday qaar ka mid ah macaamiishayda inay u maleeyaan inaysan u baahnayn inay abuuraan sharraxaadyo loogu talagalay bogga.
Qoraaga xilliyeed ee qoraaga ah, tani ma noqon doonto arrin. Si kastaba ha noqotee, dhammaan nidaamyada maaraynta maareynta ayaa hoos u dhigaya qormooyinka loogu talagalay qorayaasha, iyaga oo awood u siinaya qorayaasha khibrad yar u leh inay gacan ka geystaan ​​waxyaabaha ay ka kooban yihiin, iyagoon ka warqabin welwelka ugu habboon.
Oktoobar 21, 2011 at 1:10 AM
Hagaag CMS's waxay soo saaraan HTML sidaa darteed dabcan waxay saameynayaan SEO. Drupal waa xanuun dhammaystiran oo si habboon loogu qaabeeyo SEO, wax kasta oo aad magacaabi karto. xml sitemaps, URLs saaxiibtinimo (had iyo jeer ku noqosho / node), URLs madaxbannaan / cinwaanno cinwaan / cinwaanno, img alt tags, baloog garaynta (ha i bilaabin, ku qorista Drupal waxba kuma laha WP).
Waxaan ku jecel nahay Drupal bogagga waaweyn, laakiin maahan wax lagu farxo SEO'ify. WP way ku fududahay cilmiga xiddigiska.